Rita, Writing for My Sake!: March 2009
(ကမ္ဘာအေး ဓါတ်တော်တိုက်ထဲက ရုပ်ပွားတော်)
(မဟာ သဒ္ဓမ္မရံသီ ဆရာတော်)
(ဆရာကြီးဦးဘသန်း မွေးနေ့တုန်းကတဲ့.. ဖေဖေကျန်ခဲ့တာ)
(အိမ်က ကြောင်ကြောင်, New Born Baby... ရှေ့ကို မလာလို့ ချောင်ထဲထိ သွားရိုက်ရတယ်)
ကိစ္စအားလုံး ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားကို တညနေ ဖူးခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ မဟာသဒ္ဓမ္မရံသီဆရာတော် ရှင်ကုသလ္လာဘိဝံသကို မေမေ၊ အဒေါ်၊ ဖေဖေ့ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း အန်တီတစ်ယောက်တို့နဲ့တူတူ သွားဖူးပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အရင် မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းက ဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့ တော်တော်ဝေးတာပါ။ ဘယ်တရားပွဲမှလည်း ညဘက်သွားပြီး မနာဖူးပါဘူး။ မရမ်းကုန်းတမြို့နယ်ထဲနေပြီး သဒ္ဓမ္မရံသီဆရာတော် ကိုလည်း ခုမှ ဖူး, ဖူးတာပါ။ အတူနေတဲ့ အဒေါ်ကတော့ မကြာခဏသွားပါတယ်။
ကမ္ဘာအေးဘုရားမှာလည်း တံမြက်စည်းလှည်းခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်ကလို...
နောက် ၀ယ်စရာရှိတာတွေ ၀ယ်ဖို့ Junction 8, ကမ္ဘာအေးက ဂမုန်းပွင့်၊ လှည်းတန်း စိန်ဂေဟာ (အရင် စန္ဒာမြိုင်နေရာမှာ)... ရန်ကုန်ကပဲ ပြောင်းတာလား ကိုယ်ကပဲ ပြောင်းတာလားတော့ မသိဘူး။ အရင်က city mart မှာ ဈေးဝယ်ရရင် သိပ်သဘောကျတာပဲ။ ခုတော့ အရောင်တွေ မှိန်နေသလိုလို... air con ကလဲ သိပ်မအေးဘူး...ဘာလိုနေပါလိမ့်လို့တွေးမိတယ်။
မြို့ထဲ ပလက်ဖောင်းတွေပေါ် လျှောက်ရတာ အဆင်မပြေ...ဘေးက မီးစက်သံတွေ တဒုန်းဒုန်း ... လောင်စာဆီနံ့တွေကနံ...ဒါတောင် မြန်မာပြည်မှာတုန်းက generator trading မှာ နှစ်နဲ့ချီ လုပ်လာတာ...(ဒါပေမယ့် ကိုယ်တို့ သွင်းတဲ့ generator တွေက Made in UK တွေကိုကွယ်...ကွာတော့ကွာတာပေါ့) ... သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်ကောင်းကောင်းမရှိ ပူပူခေါင်ခေါင်...
၉တန်းဖြေပြီးကတည်းက နေလာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်... ဇာတိမြေထက်တောင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့နေရာ... ပြောပြန်ရင်လည်း စင်ကာပူလောက်ရောက်ပြီး ဘာထင်နေလဲ ဖြစ်ဦးမယ် ... ပြောတော့ပါဘူး။
> ပေဖူးလွှာခေတ်က (ဦး)၀င်းငြိမ်းနဲ့ ဆရာ အောင်သင်း အင်တာဗျူးကို ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ "စာပေ လူကြမ်းမင်းသား"
> လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ ဂျာနယ် ဆောင်းပါးတွေ ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ "ပထမတန်းစား စိတ်ဓါတ်"
> ခင်ခင်ထူး ရဲ့ "ဆံရစ်ဝိုင်း" ၀တ္ထုတိုများ
> ဂျူး ရဲ့ "ကျွန်မ ချစ်သော နိုင်ငံ" နဲ့ "ကျွန်မ ချစ်သော ကမ္ဘာမြေ"
> အဏ္ဏ၀ါစိုးမိုး ရဲ့ "အဏ္ဏ၀ါ ခရီးသည်"
> လူထုဒေါ်အမာ ရဲ့ "ရွှေမန်းတင်မောင်" (အဲဒီစာအုပ်ကတော့ ပြီးအောင် မဖတ်နိုင်ခဲ့ဘူး)
ဒီမှာ ဖတ်ဖို့ ၀ယ်လာဖြစ်တာတွေက...
> Dr. ခင်မောင်ဝင်း (အသည်း) ရဲ့ "အမေနဲ့ ကျွန်တော်" (ကလျာမှာ အခန်းဆက်ရေးကတည်းက ဖတ်ခဲ့တာ...အဲဒီဆောင်းပါးစုရဲ့ အကြောင်းအရာကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်... အငွေ့အသက်ကို ပိုပြီး ကြိုက်ပါတယ်)
> ၀င်းထွဋ်ဇော် ဘာသာပြန်တဲ့ "ပါဝါ ကျဆုံးခြင်းနှင့် စင်ကာပူ ဘ၀ရနံ့ ၀တ္ထုတိုများ" (One Singapore by Goh Sin Tub)
အဲဒီ စာအုပ်မှာ စင်ကာပူ သမ္မတ နဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဂိုချောက်တောင် အမှာရေးထားပြီး၊ စာရေးသူ Goh Sin Tub ဟာ စင်ကာပူ ပညာရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကျော်ကြားသူ၊ Public Service ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသူလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁၉၂၇ ဖွားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ ဖူးသူပါ။
(စာအုပ်ကို ခုထိ မဖတ်ရသေးပါ)။ စင်ကာပူဟာ ကျွန်မ ငယ်ဘ၀ စိတ်ကူးအိပ်မက်ထဲ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ ရောက်သာရောက်လာတာ စင်ကာပူ အကြောင်း ဘာမှ မသိသလောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်ကို တွေ့တော့ ဖတ်ရမယ် ဆိုပြီး ၀ယ်လာခဲ့တာပါ။
Mechanical က ဆရာကြီး ဦးဘသန်း (၇၈) နှစ်မွေးနေ့ပွဲက အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလာတာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ကျောဘက်မှာ လက်ရေးနဲ့ ဆုတောင်းစာ။ ဆရာကြီး လေဖြတ်ထားလို့ လက်ရေးလေးတွေက ကလေး လက်ရေးလေးတွေလိုပဲ။ ဆရာကြီးကို သိပ် familiar မဖြစ်ပါဘူး။
ဘာလို့ဆိုတော့ ဖေဖေတို့က အဆောင်နေလာတော့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာတွေထက် အဆောင်မှူးတွေနဲ့ ပိုရင်းနှီးခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖေဖေ့ Major ဆရာတွေထက် Textile က A ဆောင် အဆောင်မှူး ဆရာဦးလှရွှေတို့ ၊ Chemical က အင်းလေးဆောင် အဆောင်မှူး ဆရာ ဦးတင်လင်း (ယခု Temasak Poly) တို့တွေကိုပဲ သိနေ၊ ရင်းနှီးနေပါတယ်။ ဆရာ ဦးလှရွှေကို ခဏ ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒူးနာတာကလွဲလို့ ကျန်းကျန်းမာမာရှိပုံပါ။ ဆရာဟာ ဟိုးအရင် ကျွန်မတို့ နယ်မှာနေတုန်း ဆုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရွယ်ထက် ပိုကြီးသွားတယ် မထင်ရပါဘူး။ အဲဒါကို သူ့တပည့်ဟောင်းတွေ တညီတညာတည်း ပြောကြတာကို ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတို့မျက်နှာတွေဟာ stress မရှိတဲ့ ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာမျိုးတွေပါ။
(Blogger တွေထဲမှာ RIT ကလူတွေ တော်တော် များများ ရှိတာမို့ information ပေးတာပါ)
အဲဒီ ဆရာကြီး ဦးဘသန်း မွေးနေ့ပွဲက အခွေကို ဖေဖေပါလို့ လုံးဝ မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။ သတင်းကြားတာတော့ ပါမောက္ခတွေ စကားပြောတဲ့ အချိန် ကျောင်းသားတွေ(အသက် ၄၀ကျော် ၅၀ကျော်များ) တယ် ဗရုတ်ကျဆိုပဲ။
Posted by Rita at 3/29/2009 01:16:00 PM 10 comments Links to this post
မင်း အခု ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုပါ။
မင်း ကိုယ့်ကို စာပြန်အုံး
13 Mar 09, 14:44
kom: အဖေ နေမကောင်းဘူးလား။ အစ်မကို အကြောင်းပြန်ပါဦး စိတ်ပူနေတယ။် take care..
မေးလ်ပိုပြီးရင် စီပုံးမျာ မျက်မှာလာပြပေးပါ။ စကားမပြောချင်လဲ ရတယ။် အစ်မက မေလ်ကို ပိတ်ထားလေ့ရှိလို့ပါ။ အကောင့်ငါးခုရှိလို့ပါ။
be in peace mind
4:27 PM နင့်ကို online မှာ မတွေ့တော့လို့ နင်များရန်ကုန်ကို ပြန်သွားလား လို့ စိတ်ကထင်လိုက်မိတယ်
4:28 PM နင့် blog ကိုဝင်ကြည့်ရင် သဲလွန်စ တစ်ခုကို ရမှာပဲလို့ ငါတွက်မိတော့
4:29 PM ခုချက်ချင်းပဲ blog ကို ငါဝင်ကြည့်မိတယ်။
4:30 PM “ နင့်ဖေဖေ သတင်းကို NT ရေးထားတာတွေ့ရတော့ ငါစိတ်မကောင်းလိုက်တာဟာ”
4:31 PM နင်ဖေဖေကိုနင်အရမ်းချစ်တာ ကျောင်းနေစဉ်တလျှောက်လုံးငါသတိထားမိပါတယ်
4:34 PM ဒီသတင်းကို ကြားရတာ ငါတော်တော်ကို shork ဖြစ်သွားတယ်။ နင်နဲ့ထပ်မျှဝမ်းနည်းမိတာ ငါ့ရင်တွေတောင် တဒိန်းဒိန်းခုန်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစာကို ရေးလိုက်တာ။ ဘာမှစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့လို့အားပေးချင်ပေမယ့်
4:35 PM အဲဒိတော့ ငါ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စကားပဲ ငါပြောတော့မယ်။
Ama ! we are hear about this news , we feel so sad sis.Anyone will pick u at airport when u came back ?what time r u reach at singapore?Take care sis !!!!
(S ei) (Room mates)
28 Mar 09, 00:06
JulyDream: Welcome back...
27 Mar 09, 23:53
MS&EM: Life is eternal, and love is immortal, and death is onlyahorizon; andahorizon is nothing save the limit of our sight...
မိုးချိုသင်း: အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ဝါသနာပါရာဖြစ်ဖြစ် occupy ဖြစ်အောင်နေပါ။ ဒါဆို ခံစားရတာ သက်သာမယ်။
မိုးချိုသင်း: ကျန်းမာရေးလဲ ဂရုစိုက်ပါအုံး။ လူက ပိန်ပိန်လေး။
27 Mar 09, 23:34
မိုးချိုသင်း: ညီမရေ ပြန်ရောက်ပြီနော်။ အမ လာအားပေးပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ကို ခိုင်အောင် ထားပါ။ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပါတယ်။
27 Mar 09, 23:30
27 Mar 09, 00:42
25 Mar 09, 08:31
thetpaingthu: မမရိတာရေ.. ပြန်လာခဲ့တော့လေ
21 Mar 09, 10:11
thetpaingthu: မမရိတာရေ.... အဆင်ပြေပါစေနော်
19 Mar 09, 13:51
ကို: may be happy!
sdl: ရီတာရေ.. အားတင်းထား
18 Mar 09, 01:11
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ: အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ
17 Mar 09, 22:04
visuta: sorry to hear the death of your father, my feeling is same to you. Soo after i reached to my university, i read your post and knew the sad news. Once again let me say, so sorry to hear such news.
kyiphyupaing (chomar): နင်နဲ့ထပ်တူထပ်မျှနီးပါးဝမ်းနည်းတာငါ့ရင်တွေတောင် တဒိန်းဒိန်းခုန်သွားတယ်။ဘာမှအားမငယ်နဲ့လို့ပြောချင်ပေမယ့် ထိရောက်မှာမဟုတ်မှန်းသိတော့ စိတ်ထဲရှိတာပဲပြောတော့မယ်။နင်နဲ့ထပ်တူနီးပါးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
15 Mar 09, 16:45
kyiphyupaing (chomar): နင့်ဖေဖေသတင်းကို NT ရေးထားတာတွေ့ရတော့ ငါစိတ်မကောင်းလိုက်တာဟာ။နင့်ဖေဖေကိုနင်သိပ်ချစ်တာ ကျောင်းနေစဉ်တလျှေက်လုံးငါသတ်ိထားမိပါတယ်။ဒီသတင်းကြားရတော့ငါshork ဖြစ်သွားတယ်။
15 Mar 09, 16:41
kyiphyupaing (chomar): သူငယ်ချင်းရေ...နင့်ကိုonline မှာမတွေ့လို့နင်ရန်ကုန်များပြန်သွားသလားလို့စိတ်ကထင်လိုက်မိတယ်။နင့်blog ကိုဝင်ကြည့်ရင်သဲလွန်စတစ်ခုတော့ ရမှာပဲလို့ငါတွက်မိတော့ ခုချက်ချင်းပဲ blog ကိုငါဝင်ကြည့်မိတာ။
15 Mar 09, 07:53
အန်တီချမ်း: heard from KOM felt sorry, we all will be with you, hang in there dear
15 Mar 09, 00:34
မိုးချိုသင်း: ညီမရေ အမတို့လုပ်ပေးနိုင်တာ ရှိလဲ ပြောပါအုံး။
15 Mar 09, 00:32
မိုးချိုသင်း: ညီမလေး ကိုယ်ချင်းစာစိတ် အပြည့်နဲ့ အားပေးသွားပါတယ်။ အားတင်းထားပါ။
15 Mar 09, 00:28
မိုးချိုသင်း: ညီမလေးရေ..မမဆီက သတင်းကြားလို့ လိုက်လာတယ်။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ တို့ အမျိုးတွေပဲ။ လေးလေး ဦးမြင့်မောင်ရော နေကောင်းရဲ့လား။
14 Mar 09, 23:08
အောင်သာငယ်: မKOM ပြောလို့ သိရပါသည်... စိတ်မကောင်းပါ...
14 Mar 09, 20:52
thetpaingthu: မမရီတာရေ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေနော်။ မမနဲ့ အတူတူ ၀မ်းနည်း မိပါတယ်နော်။
14 Mar 09, 18:40
သက်ဝေ: ရီတာရေ... အရမ်း စိတ်မကောင်းပါ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေနော်...
14 Mar 09, 15:02
TZA: အစစ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
14 Mar 09, 12:50
pm: အန်တီkom ပြောမှသိရ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရန်ကုန်ပြန်တော့မည်မှန်း...
14 Mar 09, 12:09
ုkom: ကျေးဇူး NT အားလုံးက စိတ်ပူနေကြတယ်
14 Mar 09, 08:57
NT: She went back for her father funeral, just for your info
14 Mar 09, 00:27
MayMoe: အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေနော်
13 Mar 09, 23:52
sdl: ညီမရေ.. ညီမဖေဖေကျန်းမာချမ်းသာပါစေ....ဆုတောင်းပေးနေတယ်နော်
13 Mar 09, 23:35
သီဟသစ်: Rita ရေ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေကွာ
13 Mar 09, 19:18
အန်တီချမ်း: ဒေါ်ရီတာ ဘာဖြစ် သတင်းလာမေး
ဖိုးစိန်: ဘုမသိ ဘမသိပေမယ့် ရောရောင်စိတ်ပူမိပါသည်..အဆင်ပြေပါစေဗျာ..
zt: အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ။
13 Mar 09, 15:28
kom: စိတ်ပူနေသည်။ စိတ်အေးအေးထားပါ။
kom: ရှောင်တခင် နက်ဖန် (13.3.2009) မြန်မာပြည် ပြန်မည်။ ၂ ပတ်ခန့်ကြာမည်။ လတ်တလော မှောင်သွားလိုက်တာ
13 Mar 09, 14:41
kom: လာကြည့်တယ် ညီမ. ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။
13 Mar 09, 14:29
13 Mar 09, 08:38
မနောသား: အလည်ရောက်ပါတယ် ..ပျော်ရွင်ပါစေ ..
13 Mar 09, 03:14
thetpaingthu: ပြန်တော့မှပေါ့လေ.... နာလိုဘူးဂျ
12 Mar 09, 23:49
အန်တီချမ်း: ဒေါ်ရီတာ ထထ အောက်မှာခွေးချီးတွေ (စပေးနေတာနော် ဒီလိုပေါ့ကွယ် ဘ၀ ဆိုတာ လဲကျလိုက်ပြန်ထလိုက်ပေါ့ ဒူးနာ ဒူးပွန်းလဲခဏပါပဲကွာ မပူပါနဲ့ တို့တွေရှိပါတယ်)
12 Mar 09, 20:41
12 Mar 09, 20:27
သီဟသစ်: Rita ရေ Good Luck ပါကွာ
12 Mar 09, 19:09
thetpaingthu: pyan tot mal....
နန်းညီ: ဟလို ရောက်စ်တယ်စ်..
အန်တီချမ်း: ဟယ် အခွန်ရှောင်တာလားဟင်???` ဟိစတာနော်
12 Mar 09, 02:06
strike: မြန်မာပြည်မယ်ဆိုတော့ မိသားစုဝင်ထဲကနေမကောင်းတာမသက်သာလို့လား
ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်မရေးချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတင်လို့ ရေးတာပါ။
မပြန်ခင်နေ့က သံရုံးမှာ နာမည်စာရင်းကြည့်ပြီး တကူးတက လာနှုတ်ဆက်တဲ့ စကားအကြာကြီးပြောဖြစ်တဲ့ အစ်မ မသီတာ (Sonata-Cantata)
သံရုံးကို ကြိုသွားပြီးစာရင်းသွင်းပေး၊ ကျန်တဲ့ကိစ္စ အစစ ကူညီပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း မင်းလှတာ
လေယာဉ်လက်မှတ်အတွက် ချက်ချင်း ငွေလွှဲပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ဉာဏ်ထွန်း
ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတွေကို ဝေမျှနေကျ သူငယ်ချင်း စု
လေယာဉ်ကွင်းကို တကူးတက လိုက်ပို့တဲ့ အခန်းဖော် ညီမလေးနှစ်ယောက်
လေယာဉ်ကွင်းအရောက် ဖုန်းဆက်ပြီး တူတူ ငိုပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း မိုင်သီ
သိသိချင်း စိတ်ပူ သတင်းမေးတဲ့ မမ ခင်ဦးမေ၊ မမချို၊ သူငယ်ချင်း ချိုမာ
မအားတဲ့ကြားက ညဘက်ကြီး လာကြိုပေးတဲ့ စု နဲ့ မောင်လေး စည်သူ
cbox မှာ သတင်းမေးသမျှ ချစ်ခင်စွာသော blogger များ နှင့် blog reader များ
ကျေးဇူးတင်စရာရှိသမျှ လူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင် မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
(ကျေးဇူးတင်စရာ စာ နောက်တစ်စောင်ကိုတော့ ကာယကံရှင် မနှစ်သက်မှာစိုးလို့ မဖော်ပြတော့ပါ။ အဲဒီစာအတွက် ကျေးဇူးကို ဒီနေရာမှာပဲ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်)
Posted by Rita at 3/27/2009 11:50:00 PM7comments Links to this post
Labels: My Father, remembrance
ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် လဲကျတိုင်း ဖေဖေပဲ ထူမတ်နိုင်ခဲ့တာ
ဒီတခါ လဲကျတော့ ဘယ်သူက လာထူနိုင်ပါတော့မလဲ
Posted by Rita at 3/12/2009 05:43:00 PM Links to this post
အခွန် ဆောင်ရတော့မယ်။ Passport သက်တမ်း တိုးရတော့မယ်။
Posted by Rita at 3/09/2009 06:31:00 PM7comments Links to this post
Posted by Rita at 3/08/2009 12:04:00 AM9comments Links to this post
Posted by Rita at 3/06/2009 10:11:00 PM 10 comments Links to this post
Posted by Rita at 3/04/2009 10:51:00 PM 8 comments Links to this post